Dekadda Muqdisho Oo Aanan Shaqeyn 7 Maalin Iyo Ganacsatada Banaadir Oo Ka Hadlaya – Goobjoog News
Waxaa muddo 7 todobaad ah aanan shaqeynin dekadda weyn ee magaalada Muqdisho, ganacsatada gobolka Banaadir ayaa waxaa ay ka cabanayaan canshuur kordhis.
Shir jaraa’id oo ganacsatadu maanta ku qabteen magaalada Muqdisho, waxaa ay ka hadleen dhowr qodob oo ay ku sababeeyeen cabashadooda.
Qodobadaasi waxaa ka mid ahaa:
1. Dekadda Muqdisho waxa ay ka qarash iyo canshuur badantahay dekadaha ka jira Soomaaliya taasi oo keentay in ganacsatada Muqdisho ay ku qasaaraan badeecooyinka ay ka soo dejiyaan dekadda, maadaama aysan la tartami Karin badeecooyinka kale ee laga soo dajiyo dekadaha kale ee dalka lagana qaado canshuur ka yar tan muqdisho.
2. Waxaan xasuusineynaa madaxda in ganacstada gobolka Banaadir ay yihiin ganacstada ugu canshuurta bixinta badan dalka ayna si gaara iskaga xilsaareen dhismooyinka wadooyinka Muqdisho iyo arrimaha la xiriira gurmadka iyo taakuleynta dadka nugul oo dhibaatada ka soo gaartay abaaraha wadanka.
3. Waxaan ka codsaneynaa wasaaradda maaliyadda in canshuuraha xad dhaafka ah ee dusha laga saaray ganacsatada gobolka Banaadir ay dib u eegis ku sameyso
Waxaan ugu baaqeynaa wasaaradda maaliyadda in si isku mid ah oo loo wada simman yahay uga qaado dhammaan ganacstada Soomaaliyeed, lagana daayo ganacsatada gobolka Banaadir culeys canshuureedka sida gaarka ah looga haayo.
Ugu dambeyntii, waxaan ka codsaneynaa madaxda dalka oo uu ugu horreeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda in ay soo faro galiyaan arintani , waxna laga qabto dhibaatada heysata ganacstada gobolka Banaadir.